काठमाडौँ, असार ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय याेग दिवसका अवसरमा “राष्ट्रिय याेग अभ्यासक्रम (National Yoga Protocol) काे बालुवाटारस्थित एक्सन रूमबाट बिहान विमाेचन गरेका छन् । उनले व्यायाम, प्रणायाम र ध्यानकाे संयाेजन नै पूर्ण याेग रहेकाेमा जाेड दिदै हिमवत् खण्ड आयुर्वेद र याेगकाे उद्गम र विकास स्थल रहेकाे बताएका छन् । राेगकाे उपचारभन्दा पहिले […]
काठमाडौँ, ७ असार । जुन महिनाको २१औँ तारिख अर्थात् असार ७ गते आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५ देखि जुन २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन शुरु गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने व्यवस्थाका लागि सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदामोदरदास […]
नवलपुर, ५ असार । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व) को देवचुली नगरपालिकामा रहेको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयले प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्दै आएको छ । जिल्लाकै पहिलो कोरोना अस्पतालका रुपमा सेवा प्रदान गरेको चिकित्सालयले नेपालमा नै पहिलोपटक प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट कोरोना सङ्क्रमितको उपचार शुरु गरेको हो । हाल अस्पतालमा जिल्लाभरिका ५६ जना कोरोना सङ्क्रमितले उपचार गराइरहेका […]
ब्रह्मबृक्ष पलास र यसका औषधीय गुणहरु
आयुर्वेदमा प्राचीन कालदेखि प्रयोग हुदै आएको जडिबुटी अन्तर्गत पर्ने पलासको बारेमा छोटो जानकारी पस्कन गइरहेका छौं । पलासलाई ब्रह्मबृक्ष भन्ने गरेको पाइन्छ । पलास नेपाल, भारत लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा पर्याप्त मात्रामा पाइने एउटा जडिबुटीमूलक औषधि हो । धार्मिक मान्यता अनुसार यस्को रूखमा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको बास हुने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । […]
आयुर्वेदिक औषधि वितरण शुरु
सुर्खेत, ३२ जेठ । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आयुर्वेदिक औषधि वितरण शुरु गरेको छ । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा पुगेर औषधालयले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहेका नागरिकलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने खालका विभिन्न औषधि वितरण गरेको हो । औषधालयले हालसम्म क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहेका […]
काठमाडौँ, २० जेठ । नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक सङ्घले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५०० थान ज्याकेट वितरण गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ज्याकेट वितरण गरिएको हो । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पौडेल, उपाध्यक्ष मानबहादुर साउद, महासचिव सुमन पाण्डेसहितको टोलीले सोमबार आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष डा प्रकाश ज्ञवाली […]
कोरोना सङ्क्रमितलाई आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग कतिको ठिक ?
स्याङ्जा, १७ जेठ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण देखिएपछि जिल्ला अस्पतालको आइसोलेशनमा राखेर उपचार गराइएका बिरामीको उपचारमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणले महामारीको रुप लिएको अवस्थामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग काठमाडौँबाट तयार पारिएको प्रोटोकलअनुसार तयार पारिएको औषधि प्रयोगमा ल्याइएको हो । जिल्ला अस्पतालसँग समन्वय गरेर […]
गर्भधारण र सन्तानको इच्छा हुनेहरूका गरिने उपचार
आज अधिकांश परिवारमा यो समस्या देखिएको छ । थुप्रै उपचार गर्दा गर्दा ठिक नभएका धेरै केस छन् । हाम्रो बुबा हजुरले गर्नुहुन्थ्यो जुन आज मैले सबैको लागि यो फार्मुला सेयर गर्दैछु । कुनै पनि चिजलाई हल्का रूपमा लिनु हुदैन । हाम्रो समाजमा यस्ता अनेकौं फार्मुला छन्, जसको प्रयोग अल्छीपनका कारण हामीले त्यसै छोडेका छौं । […]
मोतियाविन्दुको होम्योपैथीक औषधिवाट सफल उपचार
आजको लेखमा होम्योपैथीक औषधिबाट मोतियाविन्दुको उपचार कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछु । मोतीविन्दु पनि अन्धोपनको प्रमुख कारण मध्ये एक हो । आजकल नेपालमा अप्रेसनद्वारा मोतियाविन्दुको उपचार भइरहेको छ । आजको लेखमा अप्रेसन नगर्नेहरूको हकमा मैले होम्योपैथीक औषधि पस्कन गइरहेको छु । मोतियाविन्दु भने हाम्रो आँखामा लेन्स हुन्छ यो युवा अवस्था सफा हुन्छ विस्तारै […]
कोरोना भाइरस प्रतिरोधी जडीबुटीहरू
विश्व आज कोरोना महामारीको चंगुलमा फस्दै गईरहेको छ । रोग लागेकामध्ये ३ प्रतिशत विरामीहरूको मृत्युवरण भईसकेको र रोगको खास रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारका कुनै पनि औषधि एवं भ्याक्सिन बनी नसकेकाले अझै कति मान्छेहरू यो रोगले मर्ने भन्ने टुंगो छैन । यो रोगको संक्रमणको कारणले मर्ने हरूको तथ्यांक हेर्दा अधिकांश ९९% मान्छेहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली अत्यन्त कमजोर […]
गर्दन दुख्दा गर्नुपर्ने आवश्यक व्यायामहरु
गर्दन दुख्दा गर्नुपर्ने आवश्यक व्यायामहरु । व्यस्तता, भागदौड़ र तनावग्रस्त जीवन जिउने जो कोही पनि आज गर्दन दुख्ने समस्याले ग्रस्त छन । गर्दन दुखाइ गर्दनको हड्डी खिएर, नसा च्यपिएर कार्टिलेज र मांसपेशीको दुर्वलताको कारणले हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा गर्दनका मांसपेशीलाई बलियो बनाउने निम्न व्यायामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यायाम उभिरहेको, बसिरहेको वा उत्तनो पारेर सुतेको […]
मधुमेहका रोगीले खानुपर्ने जडिबुटीहरू
मधुमेहका रोगीले खानुपर्ने जडिबुटीहरू निम्न अनुसार छन् । १. चुत्रो चुत्रोमा बार्बेरिन नामको कम्पाउण्ड पाईन्छ । बार्बेरिनले इन्फ्लामेसन कमगर्ने, कोलेस्टेरोल कमगर्ने, पखाला रोक्ने, मुटुलाई बलियो बनाउने तथ्यहरू उजागर भएका छन । यसका अलावा बार्बेरिनले रक्तग्लूकोजलाई मेटफरमिन बराबर नै घटाउने तथ्य पनि पत्ता लागेको छ । २. बेसार बेसारमा कुर्कुमिन नामक तत्व पाईन्छ जुन एण्टि इन्फ्लामेटरी […]
गुर्जोको लहराको औषधीय महत्त्व
औषधीय गुणले भरिपूर्ण यो लहरा नेपाली ग्रामीण भेगमा ज्वरो, रुघोखोकी र चिसोमा लाग्ने बाथ लगायत अन्य अधिक रोगको औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । साथै विभिन्न खालको एलर्जी, चर्मरोग, पेट रोगमा रामवाण मानिन्छ । पछिल्लो समय मधुमेह, क्यान्सर सम्मका लागि पनि यसको औषधीय गुणको महत्व रहेको आयुर्वेद चिकित्सक दाबी गर्छन । विश्वभर कोरोना भाइरसको सन्त्रास फैलिइरहेको […]
गुर्जो खाऔ, कोरोना भगाऔ
हाम्रै घर-आगनमा पाईने चीरपरिचित गुर्जोको उपयोगिता अहिले आएर ह्वात्तै बढेर गएको छ । कोरोना भाईरसको सक्रमण विश्वभरि फैलिए सगै आज हरेक व्याक्ति आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणलीलाई सबल बनाएर यो रोगलाई जित्न चाहिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो घरआगनमै पाईने गुर्जोको उपयोगिता लाई लिएर विभिन्न अभ्यासहरू भईरहेको छ । सामान्य ज्वरो, रूघाखोकी, रक्तअल्पता, जन्डिस, गोनेरिया, अपच, अजिर्ण, […]
कोरोना भाइरसमा प्रयोग गर्न सकिने उपयोगी जडिबुटी
संसार कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको युद्धमा लडिरहेको छ । परीक्षणका लागि सरल प्रविधि, खोप र उपचारको खोजमा संसारका स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरू लागिरहेका छन् । तैपनि विकसित देशका उन्नत स्वास्थ्य सेवा भएका मुलुकमा दैनिक हजारका हाराहारीमा मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । लकडाउनको रणनीति धेरै देशले अपनाएका छन् र संसार ठप्प प्रायः छ । संसार कोरोनाकै कारण त्रसित […]
‘गुर्जाे खाऔँ, रोगप्रतिरोध क्षमता बढाऔँ’
लम्की, ८ वैशाख । कोभिड–१९ संक्रमण देखिनुभन्दा पहिले फाट्टफुट्ट रुपमा प्रयोग हुने गुर्जाे अहिले धेरैले प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसको प्रयोग बढ्न थालेपछि कैलालीको टीकापुर आसपासमा अभाव हुन थालेको छ । नर्सरीमा फालाफाल पाइने गुर्जाे यतिखेर अभाव हुन थालेपछि कतिपयले मूल्य तिरेर ल्याउन थालेका छन् । यहाँ उद्योगी, प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी र योगसाधकले मात्र नभई […]
मानव स्वास्थ्यको लागि आयुर्वेद तथा र आयुर्वेद चिकित्सा पद्दतिको महत्व
आयुर्वेद विश्वकै प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो । शरीरमा हुने वात, पित्त र कफका कारण शारीरमा रोग पैदा हुन्छ । आयुर्वेदको सिद्धान्त अनुसार शरीर, मन र आत्माको सन्तुलनमा मानव स्वास्थ्य निर्भर छ । आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पछिल्लो समयमा चिकित्सा क्षेत्रको बलियो पाटो बन्दै गएको छ । आयुर्वेद औषधि प्राकृतिक जडीबुटीबाट बन्ने गर्छ । आयुर्वेदिक औषधिका स्रोतहरू खासगरी, बोटबिरुवाका सम्मपुर्ण अंगहरू र […]
८९ रोग निको पार्ने तुलसीको वैज्ञानिक महत्व ! बैदिक सनातन सस्कारमा तुलसी पूजाको ठूलो महत्व छ । मानिस मृत्युशैयामा हुँदा प्राण त्याग्नु अघि तुलसीको बोटसंगै राख्नाले तथा तुलसीपत्र खुवाउनाले मरेपछि मोक्ष पाउँछ भनी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ । आदिकालदेखि पूजाको परम्परा बसेको तुलसीको महिमा वैज्ञानिक रुपमा पनि लाभदायक प्रमाणित भएको छ । तुलसीको मठ हुने […]
रुघाखोकी र यसको जडिबुटीहरुवाट उपचार । नाक बन्द हुने, बारम्बार सिगान आउने, नाक-आँखा चिलाउने, हाँच्छ्यु आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी खस-खस हुने, कान दुख्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने,शरीर गल्ने आदि लक्षणहरु भएको खण्डमा सामान्य बोलीचालीको भाषामा रुघाखोकी भनिन्छ । यी लक्षणहरु धेरै कारणले हुन सक्छन जस्तै Common Cold (Virus), Flu (Virus) आदि भाइरसका कारणले पनि यस्तो […]